China Ipensile mveliso kunye nabenzi | SJJ
Phumeza ukubhala okanye ukuzoba. Zonke izinto ezisetyenziselwa iipensile ezintle, iipensile ze-unicorn, ipensile yekhabhoni kunye neepensile ezahlukeneyo zicocekile, zikhuselekile ebantwaneni kwaye zinokufikelela kwimigangatho yovavanyo eyahlukeneyo.
Ipensile sisixhobo sesandla sokubhala okanye sokuzoba, ngesiqhelo ephepheni. Uninzi lweentonga zeepensile zenziwe ngomgubo wegraphite oxutywe nebinder yodongwe ekulula ukuyicima. Ezona mpahla zeepensile zixhaphakileyo zenziwe ngomthi, zihlala zijikeleze ngeenxa zonke, zinamacala amathandathu anqamlezileyo, kodwa ngamanye amaxesha ziyindilinga okanye zinxantathu. Isingxobo sangaphandle singenziwa ngezinye izinto, ezinje ngeplastiki, ukujija okanye iphepha. Ukuze usebenzise ipensile, istili kufuneka sikrolwe okanye sicocwe ukuveza isiphelo esisebenzayo somxholo njengendawo ebukhali yokuba abantu baziveze.
Ipensile sisixhobo esilula kodwa esimangalisayo esiphathwayo esihlangabezana neemfuno zeofisi yakho kwaye sifunde umbulelo kwimigca emnyama egudileyo. Ipensile yeHBngumgangatho wokubhalwa kwemihla ngemihla. Unokwenza amabakala ahlukeneyo ekhokelo kwiimfuno ezahlukeneyo kunye nokwakha okanye uku-odola ipensile efanelekileyo kuluhlu lwemidibaniso yemibala kubandakanya umgca omnye wokubhaliweyo kunye neefonti ezininzi. Ngaphandle kokusetyenziswa kwepensile, unokubeka ilogo yakho kwintengiso okanye intengiso yoshicilelo lwakho ngexabiso eliphantsi, nceda uqinisekise ukuba intsalela yegrafayithi evela kwintonga yepensile ayinetyhefu, kwaye igrafayithi ayinabungozi xa isetyenzisiwe, abantu baya kugcina besazi okanye bengazi engqondweni xa usebenzisa, kucacile ukuba le iya kuba yenye yezona zinto zilungileyo zokupasa ekukhetheni.
Yenziwe nge-basswood, grafayithi gcwalisa. Iibrashi eziethe-ethe kakhulu ziyanyangeka kwaye kulula ukuzicoca.
Amanqanaba okukhokelela: Uluhlu oludwelisiweyo ukusuka kwelona luthambileyo ukuya kwelona linzima: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, kunye no-9H.
Ukugqitywa kwe-Satin yokufumana indawo ekhuselekileyo, ekhululekile
Ukhetho lwezinto: Iipensile zeGrafite，Iipensile zeGrafite eziqinileyo，Iipensile zecrafti yotywala，Iipensile zamalahle，Iipensile zekhabhoni，Iipensile ezinemibala，Iipensile zegrisi，Iipensile zamanzi
Ilungele izipho zentengiso, izikhumbuzo, izipho zokuzalwa, njl.
Egqithileyo Abanye abicah
iipensile ezenziwe ngesiko
Iimpawu ze-ID zesilwanyana sasekhaya